Fomba 8 hampiatoana ny fanetriketrena ny hafa - Blog
Fomba 8 hampiatoana ny fanetriketrena ny hafa
Nisy olona nilaza taminao ve fa manambany tena na miaro anao? Sa angamba maheno izany matetika ianao?
Raha izany dia mety hahatsapa ho very hevitra ianao. Rehefa dinihina tokoa, dia mety manandrana mizara fampahalalana tena tianao fotsiny ianao. Na angamba maniry hanampy ianao satria mieritreritra ianao mahalala izay mety hahatonga ny fiainany, ny fahasalamany, na ny toe-javatra ankapobeny.
Matetika tokoa, izay lazaintsika amin'ny hafa dia tsy mitovy amin'ny fomba nitiavantsika azy. Mety ho tonga amin'ny fanehoana fieboeboana na fanesoana isika raha ny tena izy, manovo traikefa amin'ny fiainana isika mba hitsimbinana ny fahasarotana amin'ny hafa.
Raha tsy izany, indraindray isika dia tena sosotra amin'ny tsy fahalalan'olon-kafa, ary sarotra amintsika ny mitazona izany tsy hiditra amin'ny feontsika am-bava.
Na eo aza izany, misy fomba sasany hanakanana ny fanetren-tena ny hafa, na dia mila fahatsiarovan-tena sy faharetana aza izy ireo hampiharina.
lisitry ny tanjona hapetraka ho anao
1. Mihainoa olon-kafa.
Mety ho dodona tokoa ianao hanampy olona iray amin'ny toe-javatra na tetik'asa amin'ny fanomezana azy ireo ny fahalalanao sy ny zavatra niainanao.
Mety nahita fomba fanao tsara amin'ny olana iray ianao, na sakafo mahafinaritra, na fanazaran-tena tsara, ohatra.
Hahatsapa ianao fa handray tombony lehibe ilay olon-kafa amin'ny fampianaranao azy amin'ny fomba tsara kokoa.
Raha miatrika an'izany izy ireo, tsara! Fa raha tsy izany dia henoy izy ireo rehefa manazava aminao ny heviny izy ireo.
Tsy ianao izany olona izany, ary ho fantatr'izy ireo raha misy fomba fiasa manokana, na fihetsiketsehana, na sakafo hahasoa azy ireo na tsia.
Amin'ny fiezahana hampihatra azy ireo ny hevitrao dia tsy manaja azy ireo ianao ary manitsakitsaka ny fiandrianany manokana.
Ankoatr'izay, maro ny olona maniry ny hamantatra zavatra ho an'ny tenany. Mety hahatsapa ho sosotra sy sosotra izy ireo amin'ny filazanao azy ireo ny tokony hataon'izy ireo. Ary mahatsiaro tena ho tsy afa-manoatra intsony satria manandrana mahalala fomba izy ireo fa tsy miteny fotsiny anao hangina.
Raha manandrana milaza azy ireo izay tokony hataon'izy ireo amin'ny fomba hafa izy ireo, ary ampahafantarin'izy ireo ianao fa manao zavatra hafa, henoy izy ireo.
Tsy mila manaja ny fomban'izy ireo ianao, fa ekeo ny zava-misy fa te hidina amin'io lalana io izy ireo, fa tsy ny anao.
Ankoatr'izay, maro ny olona tsy mihaino ny hafa, fa miandry fotsiny ny fahafahany miteny. Miezaha hihaino mavitrika fa tsy hamaly.
2. Tadidio fa mianatra zavatra samihafa amin'ny fotoana samihafa ny olona.
Tsy hoe rehefa nahavita zavatra tamin'ny taona X ianao dia tsy midika hoe nanao toy izany koa ny hafa. Ny olon-drehetra dia mianatra amin'ny hafainganam-pandehany ary mianatra zavatra samihafa amin'ny taona samihafa.
Ohatra, ny fianakavianao dia mety nandeha nitoby ary ianao dia ace tamin'ny fandrehitra afo tamin'ny taona 10. Mety hirona hanodinkodina ny masonao ianao ary ho sosotra raha toa ny namana na mpiara-miombon'antoka mikorontana amin'ny fananganana iray, satria ahoana no tsy ahafantaran'izy ireo an'izany?
Angamba noho izy ireo tsy mba nanana ny fotoana toa anao.
Mety ity no afo voalohany naorin'izy ireo. Mety satroka taloha aminao io, fa vaovao tanteraka amin'izy ireo. Ary hahatsapa ho mahatsiravina tokoa izy ireo miaraka aminao misento sy mampahafantatra azy ireo ny zava-dratsy rehetra ataony.
famantarana olona iray miezaka ka nampahatezitra anao
Hianatra amin'ny fotoana ilany izy ireo, ary hanao zavatra bebe kokoa ho azy ireo amin'ny famporisihana sy fahatakarana ianao fa tsy ho adala amin'izany.
Eritrereto ny olona iray izay nomena fiara tamin'ny faha-16 taonany, ary niafara tamin'ny fitondrana azy isan'andro nandritra ny 20 taona. Mety hihomehezany ny olona mitovy taona aminy izay tsy manana fahazoan-dàlana hitondra fiara. Ahoana anefa raha tanora kamboty ilay olona iray hafa ary tsy mbola nisy nampianatra azy ireo? Sa angamba voan'ny androbe izy ireo na olana ara-pahasalamana hafa manakana azy ireo tsy hahavita izany?
Mety manana fiheverana ny lesoka ataon'ny olon-kafa ianao, saingy matetika ireo no fitongilanana anao, fa tsy ny sary feno.
3. Manetre tena, aza mandoa vola be loatra.
Misy fahalalana sy traikefa goavana eto amin'izao tontolo izao. Araka izany dia azonao antoka fa misy olona any izay hendry, matanjaka kokoa, mahay kokoa ary mahay noho ianao.
Mety ho eo an-tampon'ny faribolan'ny fiaraha-monina misy anao ianao, fa mivoaha eo ivelan'io enclave io ary hahita faribolana hafa tsy tambo isaina ankoatr'izay ianao.
Ny olona sasany dia mampiasa ny fanetren-tena sy ny fieboeboana ho ampinga ho an'ny tsy fahatokisan-tenany.
Moa ve ianao nihalehibe tao anaty tontolo iray nandevozanana tsy an-kijanona? Sa tsy eken'ny hafa manodidina anao ny zava-bitanao? Raha izany dia mety nanatsara ny fahatsapanao tena-mendrika ianao amin'ny alàlan'ny fahalalana angovo.
Araka izany, ny ego-nao dia mifamatotra amin'ny zavatra fantatrao. Azonao atao ny manandrana mandanjalanja be loatra amin'ny toe-javatra izay ahitanao fanahiana amin'ny fampideraderana ny tranomboky lehibe ara-tsainao. Azo takarina izany, saingy mety hampanalavitra ny hafa.
Aza adino ny zava-misy fa mbola betsaka ny zavatra hianaranao, toy ny olon-drehetra eto ambonin'ny planeta. Na ny mpiady mahay indrindra aza dia afaka mianatra teknika vaovao amin'ny mpiady amin'ny faritra hafa.
4. Manontany foana aloha.
Efa nahatsapa fahasosorana ve ianao rehefa nisy olon-kafa nanomboka nanao lahateny anao tamina lohahevitra iray izay efa fantatrao tsara, satria nihevitra izy ireo fa tsy mahalala na inona na inona momba an'io?
Ny hafa mety hahatsapa toy izany koa. Mety ho be zotom-po amin'ny lohahevitra iray ianao ary manomboka ny resaka amin'ny fampahafantarana azy ireo an'io, izany, ary ny zavatra hafa.
Fa nanontany azy ireo aloha ve ianao hoe inona ny nahazatra azy ireo momba an'io lohahevitra io? Sa kosa ianao nihevitra fotsiny fa vato fisaka izy ireo alohan'ny hidirana amin'ny fomba profesora?
Mety hahatsapa hadalana kely ianao raha manandrana mampianatra olona momba ny lohahevitra iray izay ahafantaran'izy ireo lavitra noho ianao.
Izany no antony fanao tsara hatrany ny manontany olona iray hoe manao ahoana ny mahazatra azy ireo amin'ny lohahevitra iray alohan'ny hanombohanao hiditra ao.
Raha tsy mahalala na inona na inona momba an'io izy ireo dia anontanio raha izy ireo te handre momba izany. Raha eny ny valintenin'izy ireo, dia manana safidy malalaka ianao handroso haingana handoka ny sain'izy ireo.
ny fomba hiatrehana lehilahy tsy manaja tena
Ary raha milaza izy ireo fa tsy liana dia angamba manontany raha te hiresaka zavatra hafa izy ireo.
Ho toy ny sisin-tany, indraindray rehefa manontany olona ny fahalalan'izy ireo lohahevitra iray ianao, dia ho hitanao fa tsy fantany fotsiny ilay lohahevitra eo am-pelatanany: tena mafana fo azy ireo izy ireo! Mety hitarika fifanakalozan-kevitra mahavariana izany ary mety ho fiantombohan'ny finamanana lehibe.
5. Fantaro raha maniry ny orinasanao ilay olon-kafa na tsia.
Izany dia mifanaraka amin'ny hevitra etsy ambony hoe tsy manitsakitsaka ny fiandrianan'ny hafa.
Mety miresaka ianao amin'ny olona iray izay manana fahalalana be dia be momba ilay lohahevitra andalovanao, fa tsy ao anatin'ny toe-tsaina hiresaka izany mihitsy.
Raha izany dia tsy misy antony ifanaovan'izy ireo aminao, ary tsy noho izy ireo tsy mbola mahalala ny lohahevitra ao anatiny. Izy io dia ny tsy ahafahan'izy ireo misavoritaka handray anjara amin'ity resadresaka iraisana ity.
sarimihetsika nicola peltz sy fandaharana amin'ny fahitalavitra
Miresaka an'io olona io ve ianao satria te-hiresaka kabary? Na satria te hiresaka lohahevitra fotsiny ianao, na inona na inona orinasa misy anao?
Raha tsy tao an-trano niaraka taminao ity olona ity dia mbola hiresaka rivotra manify ve ianao?
6. Tena manambany tena ve ianao? Sa lasa tsy milamina ny hafa?
Betsaka ny olona manolotra ny tsy fahatokisan-tenany amin'ny hafa, indrindra rehefa mahatsiaro tena ho ambany izy ireo.
Ohatra, ny olona iray izay tsy manana voambolana mandroso dia hiampanga ny hafa amin'ny fampiasana 'teny avo lenta', maneso azy ireo amin'ny fampiasana teny na andianteny tsy azony. Ny fampidinana ny hafa any amin'ny ambaratonga ahazoana aina ho azy ireo.
Toy izany koa, ny olona mahatsiaro tena ho ambany noho izy tsy manana fahaizana na fanabeazana sasany dia hampandre ny hafa fa manambany, na misehoseho, rehefa mampiseho fahaiza-manao na fahalalana tsy ananan'ny hafa.
Amin'ny ankapobeny, ny fiampangana olona ho manambany tena na manohana azy dia fomba iray lehibe hanampenam-bava an'io olona io ka ajanony tsy hampijaly ny mpiampanga azy ny lesoka vitany.
7. Tandremo ny mpihaino anao.
Indraindray isika dia mila manitsy ny voambolana, angovo ary ny volantsika mihitsy mba hifanaraka amin'ireo olona ifaneraserantsika.
Ohatra, hanamora ny teny sy andian-teny sasany izahay raha mampianatra ankizy. Tsy midika izany fa miresaka aminy toy ny imbeciles isika.
Betsaka ny olona mitsabo ny zaza amin'ny fietrena, na dia tsy fanahy iniana aza. Matetika izy ireo dia mahatsapa ho ambony amin'ny fomba iray ary mahatsapa fa afaka mampianatra ny taranaka ho avy izy ireo.
Tsy mampiseho fanajana an'ireo tanora ireo amin'ny maha zavaboary mibontsina izay mianatra rehefa mandeha.
Tsara kokoa ny mampiasa terminology fantatry ny ankamaroany mba hanampiana azy ireo hahatakatra foto-kevitra iray. Tsy midika izany fa tsy afaka mampiditra teny, andianteny ary teknika vaovao isika, fa kosa manao an'izany eo anelanelan'ny mahazatra mba hahatsapan'izy ireo fa liana, fa tsy tsy mahay.
Toy izany koa ny olona amin'ny sokajin-taona rehetra. Tsy hoe rehefa 80 taona ny olona fa tsy 8 dia tsy mbola mianatra. Fanajana ny toerana misy ny olona raha ny fanabeazana sy ny fivoarany no resahina, ary mihaona amin'izy ireo any nefa tsy manampin-javatra.
8. Mpampianatra ve ianao?
Ny olona sasany dia te-hanampy am-pahatsorana ny hafa, saingy tsy afaka mamoritra ny lohany amin'ny zava-misy fa ny zavatra rehetra lazainy dia latsaka amin'ny sofina marenina.
Mety hanana kompana mpamonjy kely izy ireo, na tena te hizara ny fahalalany amin'ny hafa amin'ny fanantenana hanatsara ny toe-javatra misy azy ireo. Fa fantatrao ve? Tsy misy olona miraharaha azy ireo.
Mety mankany amin'ny vondrom-piarahamonina sahirana ny olona iray ary te hampianatra ny olona rehetra any hamboly sakafo ho azy ireo, hamindra ny rano madio avy amin'ny farihy akaiky, hiteraka herinaratra amin'ny alàlan'ny riandrano… fa tsy tafiditra ao anatiny izy ireo.
Aleon'izy ireo mijery tele, mandeha mividy sakafo mora vidy, ary mimenomenona ny amin'ny fomba nahavitan'izy ireo fatratra.
Ary ho tezitra aminao izy ireo noho ianao manambany tena, ary miavonavona aminao noho ny fiezahana hanampy.
amber heno fanoloana ao aquaman
Farany, ny fitsipika fototra azon'ny tsirairay harahina dia ny 'aza atao d * ck.'
Aza mandany ny fotoanao manandrana mamaky any amin'ireo olona tsy te hihaino anao, satria vao mainka ho sosotra sy haneso azy ireo ianao.
Ankoatr'izay, atsaharo ny fiarahana amin'ny olona izay tsapanao fa mila ampahafantarinao amin'ny fotoana rehetra. Tsy dia ho sosotra ianao, ary tsy hahatsiaro tena ho ambany izy ireo.
Fa tsy izany, manodidna olona afaka ianaranao avy, manohitra anao ary mankafy ny orinasanao. Ho tsapanao fa faly kokoa sy feno kokoa ianao, toa azy ireo koa.
Manimba ny fifandraisanareo sa manelingelina anao ny fanetren-tenao? Mila fanampiana hanovana ny fihetsikao? Miresaha amin'ny mpanolotsaina iray androany izay afaka mitarika anao mandritra ilay fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
Fomba 8 tsy hiavonavonana (ary tsy mitovy ny fahatokisana)
11 Tsy misy toro-hevitra Bullsh * t hampitsahatra ny firesahana be loatra
Fanararaotana resaka: Ahoana ny fomba hiatrehana izany ary hialana
Fomba tsotra 5 tsy dia mahasosotra
maninona no eva marie mihantona
inona no toetra tadiavina amin'ny lehilahy
izay nilalao joey tamin'ny namana
ahoana ny fomba hitondrana fisarahana
manaova fehikibo wwe anao
famantarana fa tiany ianao nefa mitaintaina